सेबोनको सञ्चालकबाट चन्द्र ढकालले दिए राजिनामा, अध्यक्ष ढुंगानाको नैतिकताले कति गर्ला काम ? - Arthatantra.com
सेबोनको सञ्चालकबाट चन्द्र ढकालले दिए राजिनामा, अध्यक्ष ढुंगानाको नैतिकताले कति गर्ला काम ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिका सदस्यबाट चन्द्र प्रसाद ढकालले राजिनामा दिनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यमा रहनु भएका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सञ्चालक समितिको सदस्यबाट राजिनामा दिनु भएको हो ।
उहाँले महासंघका अध्यक्ष शेखर गेल्छालाई आफू सेबोन सञ्चालकमा नबस्ने जानकारी गराउनु भएको छ । ढकालले राजिनामा दिएसँगै सेबोनमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय नभएको महासंघ निकट स्रोतको भनाई छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरण्मा नाम जोडिएसँगै सदस्य ढकालले राजिनामा दिनुभएको हो ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना, सदस्य चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चन्द्र सिंह साउदको नाम जोडिएको छ । जसले गर्दा साउदले मंगलबार पदबाट राजिनामा दिनु भएको छ ।
सेबोन सदस्य ढकालले बुधबार महासंघलाई राजिनामा बुझाउनु भएको छ । अब बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने वा नैतिकतालाई बेवास्था गर्दै पदमा नै बसिरहने हुन सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ९ बुधवार १५:५१ मा प्रकाशित
अघिल्लाे सेयर बजारमा भारी गिरावट, कारोबार रकम पनि घट्यो
पछिल्लाे सीएसआरको रकम स्मार्ट लाइट जडानमा खर्च गर्न उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध